फिनल्याण्डमा एक दिनको लागि १६ वर्षीया किशोरीलाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण ! - Sagarmatha Online News Portal
फिनल्याण्डमा एक दिनको लागि १६ वर्षीया किशोरीलाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण !
काठमाडौं । लैंगिक समानताका लागि उत्कृष्ट देश मध्ये फिनल्याण्ड पर्छ । प्रधानमन्त्री सन्ना मरिनले हालै त्यसको थप उदाहरण प्रस्तुत गरेकी छन् ।
१६ वर्षीया किशोरीलाई एक दिनका लागि प्रधानमन्त्रीको पद हस्तान्तरण गर्दै मरिनले उदाहरणीय कदम चालेकी हुन् आभा मुर्तो नामकी ती किशोरी बुधबारका लागि प्रधानमन्त्री बनाइएकी हुन् । तर उनले कुनै नयाँ निर्णय गर्ने वा कानुन बनाउने छैनन् । तर उनले प्रविधिमा महिला अधिकारबारे राजनीतिज्ञहरुसँग दिनभर बैठक बसाउने छुट दिइएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको बालिका दिवसको अवसरमा च्यारिटी का लागि फिनल्याण्डले यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो प्लान इन्टरनेश्नल को गल्र्स टेकओभर मा फिनल्याण्डले भाग लिएको यो लगातार चौथो वर्ष हो ।
जस अनुरुप विश्वभरका देशबाट किशोर किशोरीहरु लाई एक दिनका लागि राजनीति र अन्य क्षेत्रको नेतृत्व दिइन्छ । यस वर्षको कार्यक्रम किशोरीका लागि डिजिटल सीप र प्राविधिक अवसर बढाउनेतर्फ केन्द्रित थियो । जहाँ केन्या, पेरु, सुडान र भियतनाम पनि सहभागी छन् ।
फिनल्याण्डकी मुर्तोले भने यसरी किशोरीको पक्षमा सबैसामु उभिएर बोल्न पाउँदा आफू खुसी भएको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् । यद्यपि सत्य के हो भने, हामीले अझैसम्म लैंगिक समानता प्राप्त गरिसकेका छैनौँ । पृथ्वीमा कहीँ पनि । जब कि, यस क्षेत्रमा थुप्रै राम्रा काम गरिसकेको भए ।
अझै पनि त्यहाँ धेरै काम गर्नु आवश्यक छ, आभा मुर्तोले भनिन् । उनले बुधबार साँझ प्राविधिमा लैंगिक समानताबारे प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर छलफल गर्नेछिन् । प्रधानमन्त्री सान्ना मरिनले भने फिनल्याण्डमा प्रविधिमा हरेकको पहुँच हुने कुराको प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।
मरिन फिनल्याण्डको तेस्रो महिला प्रधानमन्त्री हुनुका साथै सबैभन्दा कान्छो उमेरकी प्रधानमन्त्री हुन् जो गत वर्ष ३४ वर्षको उमेरमै प्रधानमन्त्री पदमा चुनिएकी थिइन् । साथै उनको गठबन्धन मन्त्रिपरिषदमा पनि महिला मन्त्रीहरुकै वहुमत छ । जसमध्ये तीन मन्त्री त ३५ वर्ष उमेर मुनीका छन् ।